Indlela uTessa abungaza ngayo
UTessa ubungaza e-London ukuze enze imali ethe xaxa.
Sasiyini isikhuthazo sakho sokuqala ukubungaza?
Nganginefiso esingatheni lapho ngiqala ukubungazela imidlalo yama-Olympics. Ngacabanga, “Yazini, mhlawumbe ngingakwazi nje ukwenza imali eyanele yeholide noma ngithi ukushisisa ikhaya lami.”
Yini ekugcine ubungaza kuyo yonke le minyaka eminingi?
Engakuphawula ukuthi lapho ngiqala ukuthola izivakashi umhlaba wami waqala waba mkhulu. Ngiyayithanda. Ngiyinxusa lase-London ngomqondo wokuthi ngilazi njengoba ngizazi idolobha futhi ngiyakwazi ukukhombisa abantu izinto abangeke bazifunde ezincwadini zeziqondiso. Ngiba nokukwazi ukubuyisela okuhle kubantu. Ngiwutho kubantu.
Akhona amacebiso noma izeluleko ngothile ocabangela ukubungaza?
Khululeka ngekhaya lakho futhi ulijabulele.
Ingabe Isiqinisekiso Sokubuyiselwa siyinto ebalulekile kuwe?
Kubaluleke nakanjani. Ngiyathanda ukuthi nginakho lokho ukuthi kungeseke futhi kungisize. Akukaze ngempela kudingeke ukuthi ngikusebenzise. Sengike ngaba nezivakashi ezinhle kakhulu, futhi ngazitshengisa ukuzethemba, nazo zangitshengisa ukungethemba. Kodwa lokho kuza nesisekelo Sesiqinisekiso Sokubuyiselwa.
Ingabe ukubungaza kuyishintshile indlela yakho yokuphila?
Yebo, ngokungenamkhawulo. Ngikwaze ukwenza iminyaka emithathu yobuciko bezindwangu e-Morley Art College. Konke engangingafinyelela kukho nengangingakuthunga futhi ngikusungule ngisebenzisa izandla zami, ngakwenza. Bengilokhu ngikwazi ukuhamba. Ukubungaza kungisize ngakhokhela ikhishi elisha nokunye ukuthuthukisa.
Ukubungaza kuyishintshe kanjani indlela ophatha ngayo ikhaya lakho?
Ngifundé ukunganamatheli kakhulu ezintweni zami.
Ezinye izindaba zababungazi
U-Dennis ubungaza e-London ngenxa yokuguquguquka nezimo enako.
Funda indlela ababungaza ngayo
UDorothee ubungaza e-London ukuze abelane ngekhaya lakhe nabanye.
U-Uslan ubungaza e-London ukuze abe yingxenye yomphakathi we-Airbnb.
Qala ukwenza indlu yakho